DOORASHO yaab badan oo maanta ka dhacday BOOSAASO iyo banaanbax xooggan oo socda.!!! - Caasimada Online
Home Warar DOORASHO yaab badan oo maanta ka dhacday BOOSAASO iyo banaanbax xooggan oo...
DOORASHO yaab badan oo maanta ka dhacday BOOSAASO iyo banaanbax xooggan oo socda.!!!
Doorashadii la filayay inay maanta ka dhacdo Magaalada bosaaso oo lagu soo dooran lahaa duqa magaaladaasi ayaa ku dhammaaday in hal musharax oo ah Yaasiin Cumar Maxamuud ay ku soo koobanto kaasoo noqday Duqa Cusub ee degmada Boosaaso kadib markii qofkii la tartamayay uu ka baxay tartanka isagoo ku dhawaaqay inaysan doorashadu ahayn mid xalaal ah.
Musharax Cumar Sadiiq oo ahaa ninkii la tartamayay duqa maanta la sheegay in la doortat ayaa shalay shaaciyay inuuka baxay tartanka oo uu ku eedeeyay inay xaqdarro ka jirto, wuxuuna maanta ka maqnaa doorashada sidaasina waxaa xilka ku qaaday Injineer Yaasiin Cumar.
Yaasiin Cumar Maxamuud ayaa saaka xilkaasi la shaaciyay inuu ku guuleystay waxaana 28 mudane ee golaha degaanka magaalada Boosaaso ay cod aan loo kala harin gacantaag ku siiyeen musharaxa kaliya ee hor yimid, taasoo magaalada ka abuurtay xiisad keentay in dadweyne ka careysan sida wax u dhaceen ay bannaanbax bilaabaan.
Ku xigeenka Duqa magaalada Boosaaso ayaa isna loo xulay Siciid Garown oo hore xilkaas u hayay mna jirin cid la tartantay ee waxay ahayd gacantaag keligii uu helay.
Beelaha degna Bariga magaalada Boosaaso ayaa si weyn u qaadacay doorashada iyo qaabka ay u dhacday waxayna ku baaqeen in golaha degaanka la kala diro, laalo doorashada xaqdarrada ah ee dhacday sida ay ku doodayaan.